Dowlada Soomaaliya oo cambaareysay filimki lagu caayey Nabi Muxamed (SCW)
Updated About:254 days ago 0
Wasaarada Garsoorka iyo Cadaalada Dowlada KMG Soomaaliya ayaa cambaareeysay filimki lagu aflagaadeeyey nabigeena Muxamed Bin Cabdullahi (CSW).
Agaasimaha guud Xaaji Maxamed Kheyr ayaa sheegay in ay aad uga xunyihiin filmkaasi oo uu sheegay in ay soo saareen calooshood u shaqeystayaal doonaya in ay iska hor keenaan Islaamka iyo dadka aan Islaamka aheyn.
“Runti diinta Islaamka ayuu meel uga dhacayaa dadkaan calooshood u shaqeystayaasha ah waxay doonayaan in ay iska horkeenaa Islaamka iyo gaalada, Mareykanka waxaan ka codsaneynaa in ay maxkamad soo taagaan dadki ka danbeeyey,”
Banaanbaxyo loogaga soo horjeedo arintaan ayaa maanta ka dhacay magaalooyin badan oo dalka Soomaaliya ah kuwaasi oo ay ka mid yihiin Guriceel, Gaalkacyo iyo deegaanada ay ka taliyaan xarakada Al Shabab.
Masaajidada dalka Soomaaliya ayaa intooda badan maanta qudbada Jumcaha lagu soo qaatay dhibka iyo dhaawaca uu filmka lagu aflagaadeeyey Nabi Muxamad (CSW) ku yahay.
Dibadbaxyo kuwaasi la mid ah ayaa maanta ka dhacay magaalooyin iyo dalal badan oo caalamka ah.
Meelaha ay ka dhaceen waxaa ka mid ah, Sudan, Tunisia, Lubnaan, Bangladesh, magaalada London, magaalada Jalalabad ee dalka Afghanstan, magaalada Brussels, magaalada Gaza, iyo dalalka Nigeria, Sri Lanka iyo Maldives.
Paris:Nin midi qoorta kaga muday Askari Faransiis ah
Kenyatta oo shaaciyay in dalkiisu uu ka taageerayo DF Somalia dhismaha Maamullada Jubbooyinka
Qaadkii ugu badnaa oo lagu qabtay buundada u dhaxeyso Norway iyo Sweden
Bayern Munich oo ku guuleeysatay Champion League Sawiro
Axmed Madoobe oo soo dhaweeyay War-murtiyedka IGAD balse kasoo horjeestay shirka Muqdisho Dhageyso
Qarax goor dhow ka dhacay Magalada Baydhabo
Feysal Cali :Qofka doonayaa midnimada Soomaaliya waa qof ka baxay diinta Islmaaka Dhageyso
Sheekh Aadan Siiro qudbadii Jimcaha ku weerara Madaxweyne Xasan Sheekh Dhageyso
KDF dragged into Somalia politics
COMMUNIQUE of the 22nd Extra-Ordinary Session of the IGAD
Major police operation underway in Ifo refugee camps in Daadab
Kenya: KDF Dragged Into Somalia Politics